Ndị mmekọ Amazon: Ọ nwere onye na - akpata ego ọ bụla? | Martech Zone
M ga-eme ihe n'eziokwu… M n'anya nwere m akwụkwọ mpempe akwụkwọ na blọọgụ m na enwere m mmasị ịkọwa akwụkwọ m na ndị ọzọ na-ede blọgụ. Echeghị m na m na mgbe mere a dime na Amazon Associates, ezie. Ọ na-eju m anya ma ọ bụrụ na akaụntụ mmekọrịta m agbajiri ma ọ bụ na ndị mmadụ anaghị azụta akwụkwọ na saịtị weebụ.
Isi okwu m nke abụọ: Anaghị m azụ ahịa na Amazon. M hụrụ n'anya Ebe na Cafe na ha Ụgwọ Ọrụ Mmemme. Enwere m akaụntụ Internetntanetị na T-Mobile ka m wee nọrọkwuo oge n’ebe ahụ. (Sad, huh?) Ebee ka Mmetụta Ozi Ntuziaka ma ọ bụ mmemme mgbakwunye?
Taa, emelitere m mpempe akwụkwọ m. Lee ndị m na-agụ ugbu a:
Mee ka m mara ma ị pịa ma zụrụ nke ọ bụla n'ime akwụkwọ ndị a. Ọzọkwa, achọrọ m mkparịta ụka gị banyere akwụkwọ ndị a - ma ọ bụ nkwanye ndị ọzọ. Enwere m mmasị n'ịgụ… ikekwe nke a bụ ihe jikọrọ n'etiti ndị na-ede blọgụ. Ọzọkwa, ka m mara ma ọ bụrụ na ị na-eme ka ego na Amazon Associates.
Tags: ndị edemede ahịaakwụkwọ ahịaahịa na-agụakwụkwọ ire ereahịa na-agụ
Feb 23, 2007 na 4:09 PM
Emere m ihe ruru $ 23 karịa afọ 2.5. Imirikiti nke ahụ abịawo ọnwa 3 ma ọ bụ 4 gara aga.
M mere ihe ọ bụla, Nanị ụzọ ị ga- ”akụ” oyi nke amazon na-akpakọrịta bụ ma ọ bụrụ na i nwere tọn ndị mmadụ na-eleta gị na saịtị. Ọ ka mma ịchọta ụfọdụ akwụkwọ na-adịghị ahụkebe ma debe ha na ebay
Jenụwarị 1, 2009 na 7:12 PM
M na-e depụtara ihe na ụfọdụ m ọzọ weebụsaịtị na blọọgụ ihe karịrị 2 afọ na m ka na-adịghị ọbụna ruru payout ogbo.
Achọrọ m n'ezie ịnụ site na onye na-akpata ụfọdụ ego dị ka mgbakwunye mmekọ.
Jenụwarị 1, 2009 na 7:16 PM
Jisie na nke ahụ! Enwebeghị m. 🙂
Obi dị m ụtọ ịchọpụta na ọ bụghị naanị m bụ onye anaghị eme ihe ọ bụla na Amazon, enwere m ụlọ ahịa ma nwalee ihe niile m meworo bụ 0.33 18p ka ọnwa XNUMX gachara, ị chere na m ga-ahapụ ma mee ihe bara uru dika ịmụ French.
Enweela m blog m ọtụtụ afọ ma emebeghị m pasent na ndị mmekọ Amazon. Ana m enweta ego na Google Adsense na anaghị m eme ihe ọ bụla! Ndị mmekọ Amazon bụ oke ọrụ maka ihe ọ bụla.
Dee 31, 2010 na 4: 42 AM
Doug, n'ọnwa a ezigala m clicks 16,727 na ngwaahịa dị iche iche na Amazon, wee mee nnukwu $ 23.00 - ọ gbagwojuru m anya.
Dee 31, 2010 na 7: 53 AM
Nke ahụ yiri ahụmahụ m, Brandon. Amachaghị m ma ọ gbajiri ma ọ bụ naanị ikpe nke egwu, egwu mmekọ mmekọ… mana oge m ejirila oge m na-achọ ego ọzọ!
Dec 31, 2010 na 4:42 PM
Ebe ọ bụ na post ikpeazụ m (11 awa gara aga) clicks m dị na 17,368 - na enwetara m ọrịre ọhụrụ. Echere m na isi ihe na-akwalite nnukwu ihe tiketi. Naanị ị na-ere akwụkwọ zuru ezu iji mee ka ọ baa uru. Ma ree MacBooks ole na ole, ma ọ bụ ọbụna ọdịnaya dijitalụ (dị ka ihe nkiri) nke nwere ụgwọ dị elu karị - ma ị nwere ike ịme opekata mpe $ 75 na $ 100 kwa ọnwa, jide n'aka na ị gaghị ebi ndụ na ya mana ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka mmefu biya kwa ọnwa.
Jul 29, 2012 na 4: 07 AM
Ndị enyi Amazon bụ ihe mkpofu. Ọ bụrụ na ha na-akwụ ụgwọ kwa Pịa mgbe ahụ, ha nwere ike ịba uru (dabere na ọnụọgụ pịa) mana ịnwa ime ka mmadụ zụta ihe ha na-achọbeghị na weebụ? Ee eziokwu! Onweghi onye m matara mere dime a - egbula oge gị. Gaa na adsense, ma ọ bụ buysellads. Onye ọ bụla ọzọ (belụsọ ma ịnwere ike ịbanye na mgbasa ozi agbụrụ) erughị oge gị.